Monday July 27, 2020 - 11:06:10 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Doorashooyinku waa dariiqa xalaasha ah ee loo maro isbedelka awoodeed ee dalalka dimuqraadiyadu ka hanaqaaday. Laakin doorashooyinku ma damaanad qaadaan xallinta mashaakil oo idil mar mar waaba ay sii xoojiyaan xurguftii jirtay. Waxa suutrogal ah in
doorashooyinku noqdaan qaar xor ah aanse xaq ahayn (free but not fair).
Doorashooyinku waa udub dhexaadka dowladaha wakiilada dimuqraadiga sabab? Sababtoo ah dimuqraadiyad ahaan, awoodda dowlada waxa ay ka timaadaa ogolaanshaha kuwa la
xukumayo. Waana hanaan bulshadu ku go’aamiso cida iyaga u matali lahayd nidaamka dowladnimo. Dimuqraadiyada wakiiladu waa mid ka mid ah ujeedooyinka bulshooyinka casriga ah. Wakiiladu baarlamaanku waxa ay leeyihiin saddex hawlood; metelaada doortaha (representing electorate), sameynta sharciga (making laws) iyo kormeerida xukuumada iyadoo
loo marayo dhageysiyada iyo weydiimaha.
18, May, 1991 waxa ay Somaliland ku dhawaaqday gooni-isutaaga madax banaanideeda shirkii Burco, iyada oo aasaaskii hore ee dhismaha dawliga ah lagu bilaabay in odayaasha dhaqanku soo xulaan hoggaanka, isla markaana ay jaangooyaan hanaanka siyaasadeed ee dalka. Dagaal
sokeeye, colaad xalin, dib u heshiisiin, nabad dhisid, iyo yagleelid dowladnimo casriya kadib waxa ay guda gashay hanaanka xisbiyadda badan (multiparty system) iyo doorashooyinka dimuqraadiga ah ee metalaada golayaasha shacabka (democratic elections based on
representative’s council system).
31, May, 2001 ayay dadweynaha u codeeyeen distoorka Somaliland, codayntaasi waxa ay u
gogol xaadhay in doorashooyin dadweynuhu ku dooranayaan madaxdiisa ka hirgalaan gudaha. Ansixintii dastuurku waxa ay suurtogalisay in laga guuro xaaladii kumeelgaadhka ee axdi
qarameedkii (transnational national charter), waxa kale oo xigay aasaasidii ururadda siyaasada. Bishii December ee sanadkii 2002 ayaa la qabtay doorashadii deegaanada degmooyinka, waxa saddexdii urur ee ugu codka badnaa loo aqoonsaday xisbiyadda rasmiga ah ee ku tartamaya
doorashooyinka madaxtooyadda, iyo wakiilada.
Bishii April 2003 ayaa loo dareeray doorashadda madaxtooyada waxaana ku guulaystay Madaxwayne Dahir Rayaale. Laba sano kadib Rayaale waxa uu qabtay doorashadii u horeysay muran saami qaybsi oo
ku sahabsanaa sida loo qaybsan lahaa kuraaska wakiilad ilaa la isla gaadhay maxkamadda sare, qaraarna ay ka soosaartay marankaa. 29, September, 2005 ayaa loo dareeray doorashada golaha wakiilada iyada oo la abuuray isfaham qaabka loo qaybsanayo kuraasta. Doorashadaas waxa ku tartamay 246 mushrax
oo ka kala socday saddexda xisbi ee kala ahaa Udub, Kulmiye, iyo Ucid. Tan iyo intii ka dambaysay doorashadaas dib dambe looma qaban doorashada wakiilada. Maxay tahay sababta iyo caqabadaha
hortaagan qabsoomida doorashada? Maxaa xal ah si loo galo doorashadda wakiilad? Mudadii sida sharciga ah la doortay waxa saddex jeer ka badan mudada korodhsiimaha ay ku fadhiyaan sababna?
1. Saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada (distribution of seats in the house of
2. Kala xadaynta gobolada iyo degmooyinka (delimitation of regions and districts)
3. Kootadda haweenka iyo dadka laga tiro badan yahay (Women &amp; minority clan’s quota)
4. Tirakoob la’aan rasmiya (lack of national census)
5. Goobaha codbixinta (polling stations).
6. Qoondada Dhaqaalihii lagu qaban lahaa doorashada.
7. Dib u qoondaynta kuraasta gobolada ee golaha (seat re-allocation)
8. Diwaan gelin la’aanta codbixiyayaasha golaha wakiilada.
9. Ka go’naansho la’aan siyaasadeed iyo ku dhiiranaan la’aanta go’aamada muhiimka u ah
10. Degmooyinka goboladda bariga oo aan gacanta dowlada ku wada jirin, suurtogalna ayna
la ahayn in doorasho qof iyo cod ah ka qabsoonto. Xalalka Hannaan Doorasho ee ugu Habboon 2020
Xalalkan hoos ku taxan waa afkaar ay kala qabaan aqoonyahanka bulshweyntu inta xalka u rabta in maaro loohelo mukhilada doorashada aqalka wakiilada Somaliland muddo dhaafka ah.
Taas oo ah in aqoonyahanku kala qabaan afar aragtiyood oo kala duwan;
1. In la sameeyo tirakoob dadweyne
2. In waxkabedel lagu sameeyo dastuurka JSL si loo kordhiyo xubnaha wakiilada
3. In lagu saleeyo natiijadii codbixiyayaasha doorashooyinka.
4. In hab beeleed waxa loogu qaybsado
1. Si doorashadu u suurtogasho waa in la sameeyaa tirakoobka dadka iyo guryaha
(population &amp; housing census) guud ahaan Somaliland. Tirakoobkaa waxa la ogaanayaa wadarta guud ee tirada dadka ku nool dalka, waxaana soo baxaysa sida gobolada dadku
u kala badan yahay. Marka la helo tirada cunfaanta gobolka, waxa loo qaybinayaa wadarta guud ee dadka Somaliland ku nool, kadib waxa lagu dhufanayaa 82, waxa soo
baxaysa kuraasta gobol walba inta uu ka helayo kuraasta aqalka wakiiladda. Si aynu u fahano aynu tusaale soo qaadano qiyas mala-awaal ah (hypothetical estimation), waxa
la sameeyay tirakoobka guud ee dalka, kadib wax la ogaaday tirada guud ee rasmiga ah oo ah 4,869,372 oo qof in dalka ku nool yihiin. Mar hadii tirada guud ee dalku tahay 4.8 Milyan, gobolka awdalna ka noqday tirakoobkaas 1,093,925. Si aynu u ogaano tirada kuraaska uu aqalka wakiilada ku yeelanayo sidan ayay noqonaysaa xisaab ahaan:
Awdal 1,093,925 18 22.4%
Tusmada 1 aad Saami qaybsiga kuraasta hab tirakoob ah
2. Si loo gaadho xal ku meelgaadh ah doorashadda golaha wakiilada waa in lagu saleeyaa tirokoobkii 1 ay qaaday sanadkii 2014 hay’adda Qaramadda Midoobay u qaabilsan dadka
UNPFA, wasaaradda qorshayntuna kala shaqaysay sida lagu xusay warbixinta. Maadaama oo ay dowladda Somaliland kala shaqaysay, sidaa ayaan u soo qaatay
tirakoobka eeg bogga 31 aad ee tirakoobka UNPFA.
Gobolka Tirada kuraasta Tiradii Kuraasta
Korodh / Isdhin Xadiga
29 30 1 ayaa ka go’ay 35%
Awdal 16 13 3 ayaa u
Sanaag 13 12 1 ayaa u
3. Si loo xaliyo caqabada doorashada waa in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyaa qoddobka 40 aad , farqadiisa 1 aad tirada xubnaha golaha wakiilada si waafaqsan qoddobka
126 aad ee dastuurka lagana dhigaa kuraasta aqalka wakiilada 104. Iyada oo xubnahaa baarlmanaaka lagu soo dooranayo doorasho guud oo toos ah iyo cod bixin qarsoodi ah
oo xor ah (secret ballot). Si turxaan bixin loogu sameeyo cabashada goboladda galbeedka iyo goboladda bariga waa in min 10 xubnood loogu kala daraa kuraasta.
Xalkani waa hanaan xal doorasho oo hagaajinaya qaab-doorasheedka wakiiladda bulshadda Somaliland (Modified enhanced representative’s council legitimacy).
S/N Gobolka Tirada kuraasta Tiradii Kuraasta Hore 2005 Xadiga
4. Si qabsoomida xalka mushkilada doorashada loo turxaan bixiyo ayna u fusho waa in lagu saleeyaa natiijadii codbixintii doorashadii 2005 ee gobol walba. Kadib waxa soo baxaysa
maxsuul lagu wada qanci karo. Natatiijadii codbixinta iyo sida ay tirada kuraasta goboladu u kala helayaan.
5. Si xal habboon oo maangal ah loo gaadho waa in loo qaybsadaa tirada xubnaha kuraasta aqalka golaha wakiilada ee baarlamaanka raashiyo ahaan sidan 2:1:1, oo la micno ah in
50% beesha dhexe qaadato xubnaha kuraasta, 25% beesha galbeedka iyo 25% beesha bariga. Habkan hanaan beeleedka ku salaysan sida ayaa loo kala yeelanayaa kuraast 82
ah; 40 Isaaq, 20 Gadabuursi, 20 Harti iyo 2 beelaha laga tiro badan yahay.